The Ab Presents Nepal » मृत्यु अगाडि यी पाँच काम गर्नुहोस्, जसले मोक्ष(सफलता) प्राप्ती हुनेछ!
मृत्यु अगाडि यी पाँच काम गर्नुहोस्, जसले मोक्ष(सफलता) प्राप्ती हुनेछ!
मृत्यु जीवनको सास्वत सत्य हो । जसलाई चाहेर पनि कसैले रोक्न सक्दैन । हिन्दू धर्म शास्त्र अन्तर्गतको गरुड पुराणमा मृत्यु के हो ? मृत्युपछि के हुन्छ ? मृत्यु पछि आत्मा कहाँ जान्छ लगायतका विषयबारे व्याख्या गरिएको पाइन्छ ।हिन्दु धर्म दर्शनमा गरुड पुराणको विशेष महत्व रहेको छ । मृत्यु पश्चात गरुड पुराणको पाठ गर्न पनि आवश्यक भएको मानिन्छ । शास्त्रीय विधानका लागि मात्र नभएर जीवनलाई सही मार्ग देखाउन पनि यो पुराणको विशेष महत्व रहेको छ ।आज हामी गरुढ पुराणका अनुसारमा मानिसले मृत्यु पूर्व कस्ता कार्य गरे उसले मोक्ष वा सफलता पाउँछ भन्ने उल्लेख गर्दै छखैं ।
२)एकादशी व्रत=वर्षमा २४ एकादशी हुन्छन् । यदि अधिक मास लागेको छ भने एकादशीको संख्या २६ हुन जान्छ ।
धार्मिक ग्रन्थका अनुसार एकादशीको श्रेष्ठ बनाइएको छ र त्यसदिन ब्रत बस्दा मुक्ति प्राप्त हुन्छ ।एकादशीको ब्रत गर्दा जीवनमा एकाग्रशक्ति प्राप्त हुन्छ । मन भट्नुबाट रोकिन्छ भने मृत्युपछि पनि एकादशीको ब्रतबाट पुण्य मिल्छ ।